Fonja sa firenena ?
Hay tokoa moa ka efa fanirian’ny filoham-pirenena ankehitriny ny hanitatra ny isan’ny fonja eto amin’ity nosy ity.
Ambeti-teniny tokoa io fony izy mbola nampiely hevitra, indrindra, moa raha niatrika ireo adihevitra natao tao amin’ny haino aman-jerim-pirenena tamin’izany fotoana izany. Mampahatsiahy sarimihetsika miharo hatsikana anglisy malaza iray izay. Ovaiko fonja goavana indrindra eto ambonin’ny tany i Angletera, hoy ilay mpilalao nomena ny anjara toeran’ny mpisompatra tao anatin’ilay sarimihetsika. Dia sanatria ve ho nofinofy ratsy toy izany no mba nofinofin’ny filoham-pirenentsika ankehitriny ho an’i Madagasikara ? Maha lasa saina ity fanenjehana sy fisamborana tsy an-kijanona nandritra izay nijoroan’ity fitondrana ankehitriny izay ity. Toa tsy mifidy mihitsy fa na mpitondra teo aloha na mpanao politika hatramin’ny mpianatra madinika dia samy mahazo ny anjarany avokoa ! Fa fonja sa firenena no atsangana eto ? Hanampy ny isan’ny fonja no votoatin’ny IEM sa hanarina an’i Madagasikara marina ? Ny fanenjehana ireo mitaky ny zony sy ny fahavalo politika ve izao no maika sa ny hanarina ny sosialim-bahoaka sy ny farim-piainany? Toa zary an-kilabao tanteraka tokoa ankehitriny ilay “gasy kely” izay nifidy sy nahazoan’ny tena io toerana maha filoham-pirenena io fa mbola ny kolontsain’ny valifaty politika foana no mbola manjaka. Mampivarahontsana ny maheno fa mbola lavalava ny lisitr’ireo ho tratry ny hazalambo ato ho ato. Averina hatrany fa tsy misy maha ratsy ny fanafoanana ny tsimatimanota saingy io tonga amin’ilay fitenenana hoe misy fotoanany ny zava-drehetra. Aiza ilay lazaina ho fahatsapan’ny filoham-pirenena fa marary ny vahoaka? Raha mba ireo heverina ho tsimatimanota ihany tokoa aza moa no singorina amin’izao vanim-potoana ny kisambosambotra izao maninona fa hatramin’ireo mpianatra mpikaroka mbola manomana ny hoaviny avy ankehitriny no efa ampianarina miaina sahady izany atao hoe vokatry ny tsy fanekena demokrasia kisarisary izany. Ny azo atao angamba dia ny mirary soa ireo raiamandreny hafa rehetra eto amin’ny firenena izay mbola maniry ny hiverenan’izany soatoavina atao hoe fihavanana izany eto satria dia ho sarotra tokoa ny raharaha hiandry azy ireo raha izao fitrangany izao. Zary ohatra velona amin’ny fifamonoan’ny Malagasy am-pitoerana ny mpitondra ary mbola mipetraka ny fanontaniana mandrak’ankehitriny hoe ireny trafika hanenjehana mafy ny mpiray tanindrazana ireny ve dia tsy mba nisy dian-tanana teratany vahiny?